WOW!!! လို့ဖြစ်သွားစေမယ့် Marina Mamic ရဲ့ makeup transformation ၁၀ မျိုး ! | CosmeticMyanmar
Home » Article » WOW!!! လို့ဖြစ်သွားစေမယ့် Marina Mamic ရဲ့ makeup transformation ၁၀ မျိုး !
၂၀၁၂ ခုနှစ်ကစပြီး makeup transformations တွေကိုလုပ်ခဲ့ပေမယ့် “အဲဒီချိန်တုန်းက ကင်မရာကောင်းကောင်းမပြောနဲ့ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေထဲကကျွန်မအတွက်အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ မိတ်ကပ်နဲ့ brush တွေတောင်အစုံအလင်မရှိခဲ့ပါဘူး။” လို့ပြောပြခဲ့တာကတော့ နိုင်ငံတကာက celebrity icon တွေကို မိတ်ကပ်ပညာနဲ့ ပုံတူအောင် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲပြနိုင်ခဲ့တာကြောင့် လတ်တလောမှာ လူစိတ်ဝင်စားမှုများပြားနေတဲ့ Marina Mamic ပဲဖြစ်ပါတယ်။
One of my really old transformations! Found it on my old laptop today and decided to share it with you guys! ? Marilyn Monroe ? … #makeup #makeupartist #marinamamic #marinamakeup #makeuptransformation #makeover #beauty #elegance #marilyn #marilynmonroe #marilynmonroemakeup #marilynmonroetransformation #cosplay #marinamamicmakeup #celebritytransformation #transformation #diva #makeupbyme
A post shared by Marina Mamic (@marinamamic) on Aug 11, 2017 at 2:06pm PDT
လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေမတတ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် သူမကတော့ သူမရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို လက်လျှော့ဖို့ မစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။ တခါတလေလိုအပ်တဲ့ ဆံပင်တုတောင်ဝယ်ဖို့မတတ်နိုင်လို့ ဆံပင်တုကိုအဝတ်စတွေနဲ့အစားထိုးလုပ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်မျိုးတောင်ရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ vedio တွေစရိုက်တုန်းကဆိုရင် သူ့မှာရှိတဲ့ laptop လေးရဲ့ webcam နဲ့ပဲစရိုက်ခဲ့ရတာပါ။ vedio editing လုပ်နည်းတွေကို youtube ကနေပဲရှာဖွေလေ့လာခဲ့ရတာပါ။ အဲ့လိုမပြည့်စုံမှုတွေကနေလုံးဝဇွဲမလျှော့ပဲ လူတွေကိုသူ့ရဲ့ အနုပညာကိုချပြချင်တဲ့ အိပ်မက်အကြီးကြီးကိုမလွှတ်တမ်းဆုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ သူမဟာ အခုချိန်မှာတော့ လူသိများတဲ့ makeup artist တစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ အခုချိန်မှာတော့ နိုင်ငံတကာက ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေအများစုမှာလဲသူ့ရဲ့ makeup transformation တွေကို တင်ဆက်ခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၄ ရောက်မှသာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ webcam အသစ်တစ်ခုကိုဝယ်နိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ မှပဲ iphone တစ်လုံးကိုဝယ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့သူမဟာ ရှာလို့ရသမျှဝင်ငွေအများစုကို makeup ပစ္စည်းနဲ့ vedio ရိုက်ရာမှာလိုအပ်တဲ့ lighting ပစ္စည်းများဝယ်ယူဖို့သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ခုချိန်ထိလည်း အဲ့ဒီ iphone နဲ့ပဲ vedio တွေရိုက်နေတုန်းပါလို့ဆိုပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ငွေကြေးအလုံအလောက်မရှိတာ၊ ပစ္စည်းတွေမစုံလင်တာ၊ ကိုယ့်ကိုဘယ်သူကမှအားမပေးတာ ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ ဘယ်အရာကိုမှအလွယ်တကူအရှုံးမပေးပါနဲ့လို့ သူမက အားပေးခဲ့ပါတယ်။ကိုယ့်မှာရှိတဲ့အရာတွေနဲ့ သူများနဲ့မတူအောင်တီထွင်ဖန်တီးပါ၊ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ကြိုးစားမှုရှိဖို့နဲ့ စိတ်ရှည်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပြီး နှစ်ရှည်လများကြိုးစားမယ်ဆိုရင် ကြိုးစားမှုရဲ့ ရလဒ်ကိုခံစားရမှာအသေအချာပါပဲလို့ သူမက သူမရဲ့ facebook page ကနေတဆင့်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Marina Mamic ရဲ့ makeup transformation တွေထဲက အကြိုက်ဆုံးပုံ ၁၀ပုံကိုအောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Pirates of the caribbean ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အသည်းစွဲဖြစ်တဲ့ Jet sparrow!!
You used to call me on my cellphone ကိုမှတ်မိကြလားဗျို့?
My heart will go on သီချင်းနဲ့အားလုံးရဲ့အသည်းနှလုံးကိုကိုင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ Celine Dion
Pop ဘုရင်မကြီး Gwen Stefani ကတော့ Hollaback Girl ပါတဲ့နော်။
မေမေတို့ခေတ်က အသည်းစွဲချစ်ခဲ့ကြတဲ့ အပြုံးမင်းသမီးလေး Julia Robberts
The Walking Dead ရဲ့ fan တွေလက်ညှိုးထောင်! (1)
The Walking Dead ရဲ့ fan တွေလက်ညှိုးထောင်! (2)
The Walking Dead ရဲ့ fan တွေလက်ညှိုးထောင်! (3)
Scarface ပုရိတ်သတ်ကြီးကတော့ သူ့ကိုမသိဘဲမနေပါဘူးနော်
ပျိုပျိုမေတို့ရဲ့ချစ်သည်းလေး James Bay
Marina Mamic ရဲ့ transformation တွေကိုဆက်လက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ facebook, instagram နဲ့ youtube link တွေမှာသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်နော်။
Image Source : Marina Mamic